The Ab Presents Nepal » बादल मा भगवान शिव : देखेको ३ सेकेन्डमा ॐ लेखि कमेन्ट गरे भाग्य चम्किन !
बादल मा भगवान शिव : देखेको ३ सेकेन्डमा ॐ लेखि कमेन्ट गरे भाग्य चम्किन !
शंख : शंखलाई हिन्दु धर्ममा विशेष स्थान दिइएको हुन्छ । घरमा शंख बजाउनाले घर शुद्ध हुने मान्यता रहेको छ । काग तिहारको दिन कसैलाई थाहा नदिइ घरमा शंख ल्याएर लक्ष्मीलाई अर्पित गरेमा लक्ष्मी खुसी हुने गर्छिन् ।अन्य समाचार, २० बर्षे युवतीको डाक्टरलाई प्रश्न – बिबाहपुर्वको यौनसम्बन्ध बिहे पछीका श्रीमानलाई थाहा हुन्छ कि हुदैन ?म २० वर्षीया युवती हुँ । मेरो विवाह भएको छैन, तर ब्वाइफ्रेन्ड छ । अहिले उसले मसँग यौनसम्पर्क गर्ने प्रस्ताव राख्दै छ ।